Tetikasa fanondrahana: Sas Trapnell, lakandrano ao Delaware - Ellicott Dredges
Dredge: SAS TRAPNELL, lakandrano ao Delaware, Etazonia
Tamin'ny Aprily 1984, ny SAS Trapnell, Ellicott® Brand Dredge andiany 370, dia natomboka tany Pond Noxontown akaikin'i Middletown. Tamin'ny taona fahiraika ambin'ny folo taonany nanompoany, ity sibatana ity dia nanome fitaovana hamerenana amin'ny laoniny sy hanomezana fikojakojana ireo dobo sy rano hafa ao amin'ny faritanin'i New Castle sy Kent.
Ny taona lasa dia tena be atao tamin'ny SAS Trapnell sy ny ekipany. Vita ilay tetikasa tao amin'ny farihin'i Moores rehefa vita ny antsanga maherin'ny 75,000 metatra toratelo avy amin'ny farihy. Ny fanaovana dredging dia natao tamin'ny fomba mora tohina amin'ny filan'ny fiainana anaty rano. Avy eo dia nafindra tany amin'ny Augustine Beach ny Trapnell, izay nanendrena azy hanadina fitaovana manodidina ny lalamby ary hampita izany amin'ny morontsiraka atsimo amin'ny rano mamaky rano amin'ny faritra 60,000 metatra toradroa.
Vantany vao vita ny tetik'asa Augustine Beach, dia nafindra indray ny Trapnell, tamin'ity indray mitoraka ity dia nankany Delaware City mba hanakodia ny fantsom-panaovana tanàna sy ny vavan'ny fantsona mihaona amin'ny lakandrano. Natao ny dredging mba hampitomboana ny halalin'ny tavy. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny lalina dia nanao fanapahana 8 metatra ilay dredge, iray amin'ireo lehibe indrindra nataon'i Trapnell.
Ny famafana sy ny ranomaso amin'ny dredge dia nihalehibe nandritra ny taon-dasa noho ny habetsaky ny fanararaotana mahery vaika izay nohitsin'ny fantsona sy ny fantsona. Amin'ny ankapobeny, isaky ny tetik'asa tsirairay, ny dredge dia misintona avy anaty rano ary vita ny fikolokoloana. Na izany aza, na dia teo aza ny vesatry ny asa mavesatra tamin'ity taona ity, dia nidina nandritra ny roa herinandro fotsiny ny dredge rehefa nilaina ny fanamboarana. Ankoatra ny fanamboarana ilaina amin'ny làlan-drà dia namboarina fitaovana maromaro namboarina miaraka amin'ny baiko ho an'ny boaty 16-tongotra vaovao. Ireo fahazoan-dàlana vaovao ireto dia hanatsara bebe kokoa ny fampandehanana ny dredge.
Tetikasa ho avy
Ny tetikasa naroso manaraka dia ny fandavahana ny farihin'i Garrisons. Tetikasa maro hafa izay efa fantatra fa hatao dredging amin'ny ho avy ny Becks Pond, Little Mill Creek, ary St. Andrews (Pond Noxontown.) Ny mety ho an'ny lavitra dia ny Churchman's Marsh, Lums Pond, ary Lums Pond Marina.
Navoaka avy amin'ny Ellicott® International